2018 « A.S.M.A
🎉🎇🎉 ကံထူးရှင်များထွက်ပေါ်လာပါပြီ ။ 🎉🎇🎉
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ၏ ပညာရေးရန်ပုံငွေရရှိရေး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ကံစမ်းရင်း ပညာဒါနအဖြစ် ကုသိုလ်ပြု အားပေးခဲ့ကြသော ကုသိုလ်ရှင်များထဲမှ ယနေ့ ( ၄. ၁၁. ၂၀၁၈ ) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သော A.S.M.A ပညာရေးရန်ပုံငွေ ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲမှ ကံထူးရှင် ( ၁၇ ) ဦးထွက်ပေါ်လို့ လာပါပြီ။
ကံထူးရှင်များစာရင်းထဲတွင် မိမိထိုးထားသော နံပါတ် ပါ မပါကို အောက်ပါ ပုံတွင် တိုက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဆုများပေါက်ခဲ့ကြသော ကံထူးရှင်များမှလည်း အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်ပြီး မိမိ၏ ဆုများကို ဝတ်တလုမ်ကျောင်းသို့ လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် ။ ဦးဂန္ဓသာရ = 0991268419
မှတ်ချက်/// ဆုများနှင့် လွဲခဲ့ကြသော ကုသိုလ်ရှင်များအနေအားဖြင့်လည်း ဆုမပေါက်ခဲ့သောလည်း အချည်းနှီးမဖြစ်ရစေပဲ သံဃာတော်များ၏ ပညာရေးအတွက် တစ်စုံတရာ ပညာပါရမီမြောက် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ နှလုံးသွင်း ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေ။
(၁၀) ကြိမ်မြောက် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ ပညာဒါန ကုသိုလ်ပြု အားပေးကြဖုို့ ကြိုတင်၍ အထူးဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၄. ၁၁. ၂၀၁၈
5:21 AM Share:
A.S.M.A-ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ၏ ပညာရေးရန်ပုံငွေ တိုးမြှင့်ရေး ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲနှင့် ဆုမဲပေါက်ခဲ့ကြသော ကံထူးရှင်များအား ဆုများကို ပေးအပ်ချီးမြှောက်ခြင်း အခမ်းအနား ပုံရိပ်များ ။ (၄. ၁၁. ၂၀၁၈) မှတ်ချက် // ဆုများကို အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်နှင့် အသင်းဝင် သံဃာတော်အချို့က ပေးအပ်ချီးမြှောက်ရာတွင် လက်ခံရန် ကံထူးရှင်များကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ကြ၍ ကံထူးရှင်များကိုယ်စား အခမ်းနားတက်ရောက်လာသူများအချို့မှ လက်ခံရယူခြင်း မှတ်တမ်းများသာဖြစ်ပါသည် ။ --------------------- သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ၊ ( ထိုင်း ) 4. 11. 2018
ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲနှင့် ဆုမဲပေါက်ခဲ့ကြသော ကံထူးရှင်များအား ဆုများကို ပေးအပ်ချီးမြှောက်ခြင်း အခမ်းအနား ပုံရိပ်များ
5:19 AM Share:
မနက်ဖြန် နေ့လည် ၁ :၀၀ နာရီ ASMA ကံစမ်းမဲ ဖွင့်မည် ။ ( 4. 11. 2018 - တနင်္ဂနွေ)
ပေါက်မဲနံပါတ် ဝယ်ယူအားပေးထားသူများ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၁၀ လပိုင်း ၂၄ ရက်နေ့ သည် ASMA ကံစမ်းမဲဖွင့်မည့်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အနည်းငယ်နောက်ကျပြီးမှ ဖွင့်ဖြစ်ရခြင်းအပေါ် သည်းခံ ပြီးစောင့်မျှော်နေကြသော ASMA ပညာရေးရန်ပုံငွေ ကံစမ်းမဲကို ကံစမ်းရင်း ကုသိုလ်ဖြစ် အားပေးကြသည့် ကံစမ်းမဲရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် နက်ဖြန် ကံစမ်းမဲ ဖွင့်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
ASMA Facebook Page မှာ Live လွှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ပေါက်စဉ်နံပါတ်နှင့် ကံထူးရှင်များစာရင်းကိုလည်း ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိထိုးထားသော နံပါတ်ပါတ်နှင့်တိုက်ကြည့်၍ မဲပေါက်ပါက ပေးထားမည့်ဖြစ်သော ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ကာ ဝတ်တလုမ်ကျောင်းတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
အားလုံး ကံထူးကြပါစေ ။
ASMA သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး
၃. ၁၁. ၂၀၁၈
မနက်ဖြန် နေ့လည် ၁ :၀၀ နာရီ ASMA ကံစမ်းမဲ ဖွင့်မည်
5:25 AM Share:
ဗျာလ္လ (နဝ ရူပ)
ခြူး- မြင်း- ကျား- ဆင်- စာမရီ- ကြံ့၊ သမင်- ခြင်္သေ့- ကြက်တူရွေး၊ြ့ခင်္သေ့ လည်ဆံ ဦးခေါင်း ခြီလက်၊ နှာမောင်းမှာဆင် သမင်မျက်စိ၊့ ...
ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံတော်တွင်1. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2.Mahamakut Buddhist University, 3.The World Buddhist Universit...
သူမ၏ ငယ်မည်မှာ‘‘ ဖရာသေး‘‘ ဖြစ်သည်။ ဖရာသေး ဟူသည် ‘‘နတ်သမီးလေး‘‘ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ငယ်စဉ်က အလွန်ဆော့လွန်း သောကြောင့် ချစ်စနိုးလေးဖြင့် ‘‘ဟာရီကိ...
Arakan Student Monks Association (ASMA), Thailand ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော် များအဖွဲ့ ( ထိုင်းနိုင်ငံ ) ...
ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲနှင့် ဆုမဲပေါက်ခဲ့ကြသော ကံထူးရှင်မ...